Turkiga iyo NATO oo ka wada hadlay muran ka dhex taagnaa | warsanradio baydhabo
Home WARARKA MAANTA	Turkiga iyo NATO oo ka wada hadlay muran ka dhex taagnaa
Madaxweyne Erdogaan iyo Madaxa Ururka NATO oo kawadahadaley Khilaafka xoogan ee dhexeeya Giriiga iyo Turkiga.
Madaxweynahad dalka Turkiga Rajap Dayip Erdogan ayaa wadahadal dhinaca Teleefanka ah oo ku saabsan muranka u dhexeeya Turkiga iyo Giriiga, waxaa uu la qaaday madaxa Ururka NATO Jean Stoltenberg, waxaa uuna Turkigu uu sheegey in dalkiisu uusan dooneynin ka shaqaynta dhibaatooyin horleh.
Mr Jean ayaa Turkiga u sheegey in Labada dal ay si wada jira ah isaga kaashadaaan arrintan muranka dhalisay ,isla markaana ay ka wada shaqeeyaan deganaasha Gobalka iyo tan Badda Meditreneanka, waxaana warkaan la gu sheegey war qoraal ah oo ka soo baxay madaxtooyada Turkiga.
Madaxa NATO ayaa Erdogan u sheegtay in ay qaadaneyaan kaalintooda dhex dhexaadnimo, isla markaasina ay soo dhaweynayaan wadsa hadalka uu soo jediyay madaxweyne Erdogan.
NATO iyo Turkiga ayaa murankoodu waxa uu ka dhashay shidaal baaris uu sameyn lahaa dalka Turkiga taas oo keentay, in murankoodu uu cirka isku shareero.
Dhanka kale Madaxa siyaasadda arimaha dibadda ee Midowga Yurub Josep Borrell ayaa uga digay Turkiga, in uu wajihi doono cunaqabateyn hadii uu sii wado ficillada gardarada ah ee bariga badda Mediterranean-ka ay ka wadaan sida uu hadalka u dhigay.
Hadalada Borrell ayaa yimid kadib kulan ay yeesheen wasiirada arimaha dibada ee dalalka midowga Yurub.
Sargaalkaan reer Yurub ayaa ka hadlay dareen kacsanaan leh oo ka soo kordhay ficilada Turkiga.
Turkiga ayaa gaas ka baaraya biyo ay Gariiga iyo Jaziiradda Cyprus aaminsanyihiin in iyagu leeyihiin .
Tallaabooyinka soo socda ee Midowga Yurub ayay u badantahay, in looga wada xaajoon doono, shir ay yeelanayaan wadamadaan oo dhacaya 24- bisha September ee soo aadan .
Waxaana looga gol leeyahay tallaabooyinkan in lagu xakameeyo awoodda Turkiga uu ku baadi goobeyo, gaaska dabiiciga ah ee biyaha la isku haysto.
Wasaaradda arrimaha dibedda ee Turkiga ayaa mowqifka Midawga Yurub u aragta mid aan sax aheyn, waxayna diidday sheegashada Giriiga ee xuquuqda badda Mediterranean-ka.
Afhayeen u hadlay Wasaaradda arrimaha dibadda Turkiga oo lagu magacaabo Hami Aksoy, oo ka hadlay arrintaan ayaa yiri, “Midowga Yurub awood uma lahan inay dhalleeceeyaan howlaha batroolka ee ka socda gudaha dalkeenna, waxaanna ka dalbaneynaa in ay joojiyaan arrintaan”.
Mr Borrell iyo wasiirka Arimaha dibadda ee Jarmalka Heiko Mas, ayaa carabka ku adkeeyay in Midowga Yurub uu doonayo in uu siiyo fursad wada hadal ,si loo xakameeyo xiisadda u dhaxeysa Giriiga iyo Turkiga oo labaduba xubno ka ah gaashaan-buurta NATO.
Sidoo kale Maraakiib Turkiga laga leeyahay ayaa maanta dhoolatus militeri ku soo bandhigay badda muranku uu ka taagan yahay ee Mediterranean-ka, taas oo sii kordhin karta xiisadda kala dhaxeysa Giriigga.
Turkiga iyo NATO oo ka wada hadlay muran ka dhex taagnaa was last modified: August 30th, 2020 by Admin
Sawirro: Rag soo afduubtay ilmo yar oo lagu qabtay Afgooye
Hambalyada Warsan Radio ee Bilashada Bisha Barakaysan ee Ramadaan